Ajụjụ - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Q: Ebee ka ọdụ ụgbọ mmiri dị?
Azịza: ọdụ ụgbọ mmiri anyị na-abụkarị Foshan Port, Guanghzou Port na Shenzhen Port.
A: Ogologo oge ole ka isi mmiri ịsa ahụ ga-adịgide?
B: Kedu otu isi mmiri ịsa ahụ dị na ụdị mmiri dị n'ụlọ bụ ihe abụọ na-abanye n'ịchọpụta ogologo oge tupu edochi onye na-asa ahụ. Ekwesịrị ịsacha isi ịsa ahụ otu ugboro n'izu ma ọ ga-adị mkpa ka edochi ya ma ọ bụrụ na enwere mgbochi, ebu, ma ọ bụ slime na-anaghị apụ mgbe ekpochara. Enwere ụfọdụ ndụmọdụ iji dochie isi igwe ịsa ahụ kwa afọ, ebe ụfọdụ na-ekwu iji dochie anya mgbe ọnwa isii gachara ka nje bacteria ghara ịmalite ma kpatara onye ọrụ ahụ nsogbu. maka ịsa ahụ isi na-enweghị ikanam bụ afọ ise.
Ajụjụ: Ọ ga - ekwe omume maka functons abụọ na - arụ ọrụ n’otu oge?
A: Ọ dabere na ụdị ịzụrụ. Imirikiti ụdị nwere otu valvụ na-atụgharị ebe ị na-ahọrọ otu ọrụ n'otu oge. Agbanyeghị, a na-atụgharị ụfọdụ ụdị na ntụgharị abụọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ abụọ n'otu oge.
Ajụjụ: Isi igwe mmiri m bụ nkụja aghụghọ.
Azịza: Ọ bụrụ na ịchọta ụdị ịgba mmiri na-enweghị atụ ma ọ bụ ụgbọ mmiri na-agba mmiri na-enweghị atụ, dị ka ogo 90 ma ọ bụ na-efegharị n'akụkụ, ọ na-emekarị site na oghere mkpọchi ma ọ bụ nke na-egbochi.
Ajụjụ: Gịnị ka m kwesịrị ị whilea ntị mgbe m na-etinye isi ọhụụ ọhụrụ?
A: Ee, ị nwere ike ịtụ ahịa ọnụọgụ ọ bụla ma anyị nwere ike ibudata akpa dịka nkuzi gị.
Q: Kedu ụdị ọkpọkọ m chọrọ maka isi ịsa ahụ, ½ `` ma ọ bụ ¾ ''?
A: Chengpai ịsa ahụ isi melite maka ½ '' ọkọnọ edoghi. Ọ bụrụ na ị nwere ¾ '' ọkọnọ ahịrị ị nwere ike belata ha na ahịhịa dị ka ebe ½ ''.
Q: Anyị nwere ike ịme akpa nkwado?
Q: Kedụ ka m ga-esi nweta ọkụ ị ga - asa isi?
A: Biko kpọtụrụ anyị wee gwa gị ihe ịchọrọ.
Anyị ga-eme PI maka ịkwụ ụgwọ gị. Mgbe ị natara ịkwụ ụgwọ, anyị ga-enyefe gị ya.
Ajụjụ: Gini bu isi mmiri ozuzo?
A: Isi mmiri ozuzo na-eme ka mmiri na-eme ka mmiri zoo. Chedị ịsa ahụ niile nke Chengpai na-enye onye ọrụ ohere ịgbanwe usoro mmiri ka ọ bụrụ ụdị mmiri ozuzo dị mma maka ha. Isi mmiri ịsa ahụ ndị a na-adịkarị ka diski nwere oghere roba na ha.
Q: Gịnị bụ usoro mmiri ozuzo ịgba dị ka?
Azịza: Ọ bụ ihe na - eme ka obi dajụọ, maka mmadụ gbasasiri ike ya, ọtụtụ mmadụ na - agbanye ọsa mmiri, nhọrọ dị mma ịnwe.
Ajụjụ: Ọ ga - ekwe omume idozi igwe ịsa ahụ na igwe ịsa ahụ igwekota Chengpai?
A: Ee, enwere igwe mmiri igwekota dị iche iche nke Chengpai nke enwere ihe eji edozi isi tinyere igwe igwe.
Q: Achọrọ m ijide ụgbọ okporo ígwè?
A: Obodo koodu ụlọ nwere ike ịchọ ijide okporo ígwè. Nke a bụ ihe ọzọ handrail n'ịnyịnya ala na posts, ezubere iji nye ihe mfe nghọta maka ndị na-agbago na mgbago steepụ. Ọ bụrụ na oru ngo gị gụnyere steepụ, ọ dị mkpa ịlele ma achọrọ eriri okporo ụzọ dị n'ógbè gị.
Q: Gịnị ka m kwesịrị ịlele ọtụtụ mgbe họrọ ma wụnye zoro ezo igwekota ịsa ahụ?
A: Lelee na mgbidi ihe owuwu ahụ nwere ike ịnabata usoro ụzọ nke ọkpọkọ mmiri na ụlọ dị omimi nke igwekota ahọrọ. Jide n'aka na ihe ndị na-ekpo ọkụ na nke oyi na-abanye na ntinye ziri ezi na igwekota tupu ha emee mgbidi ahụ. Gbaa mbọ hụ na mgbe plasta na tiling gburugburu igwekota ịsa ahụ na nzacha na ego valves bụ inweta maka ọdịnihu mmezi
A: Anyị bụ ndị nrụpụta. Anyị factory emi odude Foshan obodo, nso Guangzhou obodo na Shenzhen obodo. Anyi na-anabata anyị.
Q: Gini bu okwu ugwo isi?
A: 30% TT nkwụnye ego tupu mmepụta, 70% akwụ ụgwọ tupu nnyefe.
Q: you nwere ike ịmepụta ngwaahịa anyị?
A: N'ezie, imewe gị dị maka mmepe ma ọ bụrụ na ịnweta nnwale na
A: Ọ ga-ewe 10 15 ụbọchị mgbe na-anata tupu ego. Oge nnyefe akọwapụtara na-adabere na ihe na oke nke usoro gị.
Ajụjụ: Tupu m wuo ụgbọ okporo igwe m, Achọrọ m ịma ụdị igwe igwe dị mma, igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ igwe aluminom?
Azịza: igwe anaghị ata nchara bụ ihe oke nke igwe n'ihi na ọ na-egosipụta elu ike na ike tụnyere aluminum. N'ikwu okwu nke ọma, nchara na-enye uru ndị doro anya. N'ihi ịdị nro ya, aluminom na-adịkarị mfe ọkọ na nkụ, na-eme ka o sie ike ihicha ma debe ya.
Ajụjụ: Achọpụtara m mgbe ụfọdụ mmiri na-agbapụta site na eriri nke ọkpọkọ n'azụ isi mmiri. Kedu ihe mere?
Azịza: Nsogbu bụ na ike adịghị nke ọma. Wepu isi ịsa ahụ site na ọkpọkọ njikọ ma tinyeghachi teepu plumber, nke a makwaara dị ka teflon teepu. Naanị jiri eriri iji mee ka isi mmiri ịsa ahụ laghachi na ọkpọkọ.